Kuudza Vanhu Tariro Iri muBhaibheri Pamusangano Wezvemamiriro Ekunze kuParis (COP21)
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Basque Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chol Croatian Czech Danish Dutch Estonian Finnish French Galician Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hebrew Hungarian Icelandic Indonesian Italian Japanese Javanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Malagasy Malay Malayalam Nahuatl (Huasteca) Ndebele (Zimbabwe) Norwegian Oromo Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tarascan Tatar Telugu Thai Tigrinya Turkish Ukrainian Urdu Valencian Vietnamese Xhosa Yoruba
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Kuudza Vanhu vemuParis Nezvetariro Iri muBhaibheri
Kubva musi wa30 November kusvika musi wa12 December 2015, United Nations yakaita musangano waitaura nezvekuchinja kuri kuita mamiriro ekunze (COP21). Pamusangano wacho, vanhu vakabva kunyika 195 vakaungana muParis, kuFrance, kuti vakurukure zvingaitwa kuti paderedzwe kukanganiswa kwemamiriro ekunze epasi rese kuri kuitwa nevanhu. Vanhu vanenge 38 000, kusanganisira vakuru vakuru vemuhurumende, nyanzvi dzesayenzi, nyanzvi dzinoona nezvezvakatipoteredza uye vatungamiriri vemabhizinesi, vakauya kumusangano wacho. Vamwe vaisvika makumi ezviuru vakaenda panzvimbo yaiva pedyo nepaiitirwa musangano wacho kuti vanodzidza nezvekuchinja kuri kuita mamiriro ekunze.
Kunyange zvazvo Zvapupu zvaJehovha zvisina kubatanidzwa pane zvaiitwa pamusangano uyu, izvowo zvine hanya nekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza. Mazana eZvapupu akanga achiita mushandirapamwe unokosha muParis, wekuudza vanhu veko nezvetariro yavo iri muBhaibheri yekurarama panyika isina kusvibiswa.
Mumwe weZvapupu zvaJehovha paaiva muchifambiso cheruzhinji, akataura nemumwe murume aibva kuPeru, uyo ainge akapfeka hembe dzekunyika kwake. Murume wacho akataura kuti kunyange zvazvo iye aine utano hwakanaka uye achigara panzvimbo yakanaka iri mugomo, iye anonetseka nezvekuti ramangwana repasi rino richange rakamira sei. Akabayiwa mwoyo netariro inokurudzira yaakaudzwa, uye akanyemwerera paaitora kadhi rinoratidza website yedu inoti, www.jw.org.
Zvimwe Zvapupu zviviri pazvaiva muchitima, zvakataura neimwe nyanzviyezvesayenzi yekuAmerica inoona nezvekuchengetedzwa kwezvakapoteredza. Yakashamisika payakaziva kuti veZvapupu zvaJehovha vakanga vawana mubayiro kubva kuGreen Building Initiative nekuti vakazvipira kuvaka zvivako zviviri pahofisi yeZvapupu iri muUnited States kuWallkill, New York nenzira isingakanganisi nharaunda yakapoteredza. Iye akabvumawo kupiwa kadhi rinoratidza website yedu.
Vakawanda vakavimbisa kuti vachaenda pawebsite yedu pashure pekunge vashamiswa nekuti Zvapupu zvinoda chaizvo kuti zvinhu zvakapoteredza zvichengetedzwe. Mumwe mukadzi wokuCanada akanga auya kumusangano uyu, akanzwa kuti Zvapupu zvakaedza nepese pazvaigona kuchengetedza nzvimbo iri muWarwick, kuNew York, iyo inovakirwa matendere neshiri dzinonzi eastern bluebird. Munharaunda iyi ndimo mune zvivako zvemahofisi makuru eZvapupu. Mukadzi wacho akati: “Ndisati ndava kuona nezvekuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, ndaimbodzidza nezveshiri. Ndanga ndisingazivi kuti Zvapupu zvaJehovha vanhu vanokoshesa mhuka. Saka kubva nhasi ndichaverenga mabhuku enyu uye ndichaenda pawebsite yenyu kuti ndidzidze zvakawanda nezvenyu!”
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Kuudza Vanhu vemuParis Nezvetariro Iri muBhaibheri